Usizi konezinyanga eziwu-5 engaholi - Ilanga News
Home Ezemidlalo Usizi konezinyanga eziwu-5 engaholi
Usizi konezinyanga eziwu-5 engaholi
Umqeqeshi welePSL uhluleke nokuyofihla uyise engenamali
UYABALISA umqeqeshi weTshakuma Tsha Madzivhandila (TTM) osamisiwe, uVladislav Heric ngokungaholi izinyanga eziwu-5.
UBULAWA yindlala umqeqeshi odumile kwiPremier Soccer League (PSL) odalule ukuthi sekuphele izinyanga eziwu-5 engawazi umholo ekilabhini emumise isigubhukane ngaphandle kokumbeka amacala.
UVladislav Heric utshele ILANGA ukuthi ikati lilele eziko emndenini wakhe emuva kokumiswa yiTshakhuma Tsha Madzivhandila (TTM) edlala kwiGladAfrica Championship ngoNhlolanja (February). I-TTM isematheni kulezi zinsuku njengoba abaphathi bayo besanda kuphumela obala ngokuthenga ilungelo leBidvest Wits lokugijima kwi-Absa Premiership.
Ubalisa ngokungazwelwa yizikhulu zeTTM ngisho esebunzimeni eshonelwe nguyise ngoNdasa (March). Akakwazanga ukuyomfihla eSerbia ngoba engenayo imali. Nokho uthi ududuzwa wukuthi unina wasiqonda isimo abhekene naso kuleli. Ujika nelanga emzini wakhe oseCape Town.
“Ngamiswa ngendlela engenabo ubulungiswa. Namanje kangazi ukuthi ngamiswelani. Ngihleli kwami eCape Town kanti kangikwazi nokunyakaza njengoba izwe ligonqile. Sengisizwa ngabantu engisondelene nabo.
“Ngigcine ukukhuluma noTshidino Ndou (ongumxhumanisi ekilabhini) engiduduza ngishonelwe ngubaba engingakwazanga nokuyomfihla.
“Kanginayo ngisho incwadi echazayo ngokumiswa kwami. Selokhu ngagcina ngokuphela kukaMasingana (January) ukuhola. Ngikholwa wukuthi kangihlonishwanga kwiTTM. Ngiyezwa nje ukuthi bayathenga, kanginalwazi.
“Ngisenalo ithemba lokuthola umsebenzi kwamanye amakilabhu kodwa okwamanje kusathule ngenxa yeCovid-19,” kubalisa uHeric. Uthi inkontileka yakhe neTTM iphela ngokusongwa kwale sizini.
UNdou uthe okwamanje akukho angakuphawula ngalolu daba kwazise basagonqile. Uthi uyakuqonda ukuthi baningi abazothinteka ngoguquko olwenzeka kule kilabhu. Uthi akekho umuntu onomsebenzi ongunaphakade kwiTTM.
“Engikwaziyo wukuthi uHeric wamiswa, kusamele avele ngaphambi kwekomidi eliqondisa izigwegwe lekilabhu. Kuyaxaka ukugijimela kwakhe kwabezindaba ekubeni ngiyatholakala ocingweni. Wonke umuntu makalinde ithuba liyeza,” kusho uNdou.
Uyichithile eyokuthi baxoshe uMasibusane Zongo kanjalo neyokuyamaniswa kukaDan Malesela nokuzoqeqesha iTTM.
UHeric ngesikhathi ehleli esigqikini sokucija iTTM uyibeke endaweni yesine kwi-log. Sekuwumlando ukuthi wamiswa emuva kokuba bedlale ngokulingana neJDR Stars.
Previous articleImpi yamazwi “ngobuNkulunkulu” boNyazi
Next articleKukhalwa ‘ngamandla’ kufa osomatekisi